क्वारेन्टाइनमा के खाने, के नखाने? यस्तो छ विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव - Birgunj Sanjalक्वारेन्टाइनमा के खाने, के नखाने? यस्तो छ विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव - Birgunj Sanjalक्वारेन्टाइनमा के खाने, के नखाने? यस्तो छ विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव - Birgunj Sanjal
१५ असार २०७७, सोमबार ०७:४६
वीरगंज | अधिकांशको दैनिकी अहिले घर र कोठाभित्रै सीमित भएको छ। यो नेपालमा मात्र होइन, लकडाउन गरिएका भारतसहित विश्वका धेरै देशमा पनि छ। दैनिक बिहान उठेर काम र कार्यालयमा जान हतार हुने मानिसहरुको रुटिनमा पनि परीवर्तन आएको छ। व्यायामदेखि खानेकुरासम्म सबैमा फरक परेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहँदा स्वास्थ्यमा झनै ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले पनि हालै नयाँ निर्देशिक जारी गरेको छ। जसमा क्वारेन्टाइनमा रहँदा के खाने, के नखाने, कति र कसरी खाने लगायत विषय उल्लेख गरिएको छ। जसले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहँदा स्वस्थ रहन हरेकलाई मद्दत गर्नेछ।
चट्याङ लागेर ज्यान गुमाएका मृतकको परिवारलाई प्रदेश २ सरकारद्धारा १ लाख राहत
बारामा चट्याङ लागेर चार जना महिलाको मृत्यु
गण्डकी प्रदेशमा थप ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कहाँ–कहाँ भेटिए ?